बहिनी जुनी, अर्को जुनीमा पक्कै भेट गर्नेछु है ! « Bagmati Online
बहिनी जुनी, अर्को जुनीमा पक्कै भेट गर्नेछु है !
तिमीले पठाउने खानीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित कालिका प्राथमिक विद्यालय हातिडाँडाका भाईबहिनीहरु जुनी मिस कहिले आउँनुहुन्छ भन्दा होला । ती अबोध बालबालिकालाई के थाहा तिमीले यो संसार छाडेको । झलझली सम्झन्छु बहिनी । भाञ्जी सानो हुदाँ तिमीले शिक्षण पेसामा गरेको त्यो दुःख । अब त्यो विद्यालयमा तिम्रो भौतिक शरीर ती बालबालिकाले देख्न पाउने छैनन् जुनी । गाउँले पिउथुमा छोरी बोकेर क ख सिक्न गएको अब कहिल्यै देख्न नपाउने भए । न तिम्रो स्वर नै सुन्न । त्यता तिम्रो र भाञ्जीको शरीरमा आगो बल्दै गर्दा । म यता अमेरिकामा आँशुको भेलमा डुबुल्की मार्दैछु जुनी । हामी दुईभाईको चेली भन्नु तिमी एउटा मात्रै थियो । त्यो पनि बेचैमा छाडी जानुपर्यौ । जुनी यो जुनिमा भेट्न् नसकेनी आर्को जुनिमा भेटाउला जुनु अर्को जुनिमा भेटाउला ।